Daacish (IS) oo madaxa ka jartay muwaadin Ingiriis ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kooxda Daacish ayaa soo bandhigay Filim muujinaya iyagoo madaxa ka jaraya muwaadin ku dhahay UK, kaasoo lagu magacaabo David Haines, oo u shaqeynayey hay’ad samafal.
Ra’iisul wasaaraha Britain David Cameroon, ayaa sheegay in dilka David Haines uu ahaa “ficil aad u xun oo waxshinimo ah” kaddib markii kooxda Daacish ay baahiyeen fiidiyow muujinaya iyagoo lahaystaha madaxa ka goynaaya.
Mr. Cameroon ayaa sheegay dilka qof aan waxba galabsan oo gargaarka ka shaqeeya, ahaana aabaha laba caruur ah inay tahay aarin “Laga quursado oo naxdin leh”.
Wuxuu tilmaamay in ay garbaha isqabsan doonaan saaxiibkooda ugu dhow iyo dalka ay isku xulafada yihiin xilliga murugada ayna xallindoonaan dhacdada. David Haines ayaa ka shaqeynaayay howlaha gargaarka ee Suuriya.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Mr Cameron uu si buuxda ugu jiro isbeheysiga Mareykanka ee ladagaalamaya dowladda Islaamiga ah,”si la mid ah ra’iisul wasaarihii hore ee uu badalay ee Tony Blair”.
Daacish ayaa horay madaxa uga jartay labo wariye oo u dhashay dalka Mareykanka, kuwaasoo ay ka qabsadeen dalka Suuriya.
Madaxweyne Xasan oo kormeeray dhismaha casriga ah ee ku socda garoonka Muqdisho